कसरी तपाइँको B2B सामाजिक मीडिया रणनीति एक B2C रणनीति भन्दा फरक हुनुपर्छ Martech Zone
जब तपाइँ अनलाइन सामाजिक मिडिया रणनीतिहरूका बारे पढ्न जारी राख्नुहुन्छ, सामाजिक रणनीतिका लागि अधिक जानकारी व्यवसाय-देखि उपभोक्ता (B2C) मा केन्द्रित छ। तर त्यहाँ B2C र Business-to-Business (B2B) रणनीतिहरूका बीच ठूलो भिन्नताहरू छन्। हामी तिनीहरू मध्ये केही छलफल गरौं:
निर्णय-निर्माता - जबकि B2C खरीद निर्णय छोटो चक्र हुन सक्छ र खरीददार वा खरीद मा एक जोडी मा निर्भर हुन सक्छ, व्यापार निर्णय अक्सर अनुमोदन को धेरै स्तर र लामो खरीद चक्र छ।
परिणाम - जब एक उपभोक्ताले नराम्रो खरीद निर्णय गर्दछ, दण्डहरू एक व्यवसायबाट एकदम फरक हुन्छ। एक व्यवसाय व्यक्ति आफ्नो प्रबंधन को भरोसा गुमाउन सक्छ, आफ्नो काम गुमाउन सक्छ, र उत्पादन वा सेवा प्रति अपेक्षाहरू प्रदर्शन गर्दैन भने राजस्व वा नाफा गुमाउन सक्छ।
खण्ड - जबकि नाफा मार्जिन समान हुन सक्छ, बिक्री लक्ष्यहरू पूरा गर्न आवश्यक भोल्यूम सामान्यतया धेरै फरक हुन्छ। B2B खरीददारहरू प्राय संभावनाको सानो, अधिक लक्षित समूहमा काम गर्दछन्।
प्रतिभा - छोटो खरीद चक्र र उच्च मात्राको लागि गहन मार्केटिंग र विज्ञापन प्रयासको आवश्यक पर्दछ। B2B लाई राम्रो मार्केटिंग र विज्ञापनको आवश्यक छ, तर अझै बढि विक्रेतालाई परामर्श लिन र उनीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउन एक अविश्वसनीय बिक्री टोली आवश्यक छ। र केवल बिक्रीको साथ होईन, तर उनीहरूको समग्र व्यापार प्रयासको साथ उनीहरूलाई मद्दत गर्दछ। भरोसायोग्य सल्लाहकार र उनीहरूको उद्योगको सम्पत्ति जस्ता बिक्री व्यक्तिहरू सबैभन्दा सफल हुन्छन्।
यो Sprout सामाजिक बाट लेख एक सफल समावेशी गर्न आवश्यक रणनीतिहरूको बहुमत विवरण B2B सामाजिक मीडिया रणनीति.
केही कारणका लागि, धेरै B2B कम्पनीहरूले या त सामाजिक मिडिया मार्केटि gra बुझ्न वा यसको लागि बेवास्ता गर्न संघर्ष गरेको छ। B2C कम्पनीहरूले सामाजिक मिडियाको साथमा हेरेको सफलताको बावजुद, बी २ बी कम्पनीहरू अझै परम्परागत रणनीतिमा भर पर्दै छन् जस्तो कि चिसो बोलावट र व्यापार नेटवर्कि break ब्रेकफास्टमा भाग लिने। ती रणनीतिहरू अझै प्रभावकारी छन्, तर तिनीहरूलाई सामाजिक मिडियाको ठाउँमा प्रयोग गरिनु हुँदैन। यसको सट्टामा, तपाई अझ राम्रो परिणामका लागि आफ्नो रणनीतिमा सामाजिक मिडिया एकीकृत गर्नु पर्छ। डोमिनिक ज्याक्सन, स्प्राउट सामाजिक
तपाइँको B2B सामाजिक मीडिया रणनीति कसरी भिन्न हुनुपर्छ?
लक्ष्यहरू - एक B2B सामाजिक मीडिया रणनीति को लक्ष्यहरु आवाज, यातायात, लीड र रूपान्तरण मा ध्यान केन्द्रित गर्दछ। एक उपभोक्ता रणनीति प्राय: ब्रान्डि,, श्रोताको वृद्धि र भावनामा केन्द्रित हुन्छ। अर्को शब्दहरूमा ... भोल्यूम बनाम लक्षित गर्दै।
रणनीति - सामग्री, पदोन्नति, र विश्लेषण B2B सोशल मीडिया रणनीतिको फोकस हुन्। एक उपभोक्ता रणनीति ब्रान्ड वफादारी, ग्राहक सेवा र एक समुदाय निर्माण मा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछ।
सामग्री - B2B सामग्री सम्भावित विश्वास निर्माण गर्न कम्पनीका दर्शकहरूलाई शिक्षा दिन र प्रभाव पार्न विकसित गरिएको छ। उपभोक्ता रणनीति ब्रान्डको पहिचान निर्माण गर्न र तिनीहरूको अनलाइन समुदाय बढाउन प्रयोग गरिन्छ।
टैग: b2bb2b सामाजिक मीडिया रणनीतिb2b बनाम b2c सोशल मीडियाb2cb2c सामाजिक मीडिया रणनीतिनिर्णय निर्माताडोमिनिक ज्याक्सनबिक्री प्रतिभासामाजिक मिडिया परिणामहरूसामाजिक मिडिया रणनीति परिणामसामाजिक मिडिया मात्रासामाजिक बिक्रीसामाजिक बिक्री रणनीतिसामाजिक अंकुर